त्यसैले, आज हाम्रो ध्यान भाडा "गुलाबी" ( "Tele2") प्रस्तुत गरिनेछ। सामान्य मा, मोबाइल संचालक अब त्यहाँ एक विशाल प्रतियोगिता हो। र सबैलाई किन थप बहुमुखी र लाभदायक प्रस्ताव विचार गर्न प्रयास गर्दै छ छ। गरेको यो आज अपरेटर "Tele2" द्वारा प्रस्तुत गरिनेछ छ के, बुझ्न प्रयास गरौं। साथै, यो पनि जडान महसुल सम्भावित विधिहरू चिन्ता हुनेछ। गरेको सकेसम्म हाम्रो वर्तमान समस्या अध्ययन गर्न सुरु गरौँ।
तपाईं आफैलाई महसुल "गुलाबी" ( "Tele2") जडान गर्नु अघि, हामी काम गर्दै छन् के बुझ्न गर्न हुनेछ। सायद प्रस्ताव यसलाई पहिलो नजर मा देखेको छ रूपमा, त्यसैले लाभदायक हुने छैन। त्यसपछि हामी जडान को प्रश्न बारे मा सबै चिन्ता गर्न हुनेछैन।
हामी के प्रस्ताव महसुल "गुलाबी" ( "Tele2")? साइकेटिभकर वा अन्य कुनै पनि शहर - यो त महत्त्वपूर्ण। मुख्य कुरा सेलुलर अपरेटर बिल्कुल मुक्त छ को आफ्नो घर क्षेत्र को भित्र, तपाईं अन्य सदस्यहरू कुरा गर्न सक्षम हुने छ। तर, एक दिन मात्र 30 मिनेट। प्रति मिनेट 50 सेन्ट - यो मिनेट पछि गरिनेछ। अन्य संचालक कल 1 रुबल 10 kopecks आवश्यक पर्दछ। सिद्धान्त मा, लामो सबै ठीक छ रूपमा।
तर अन्य क्षेत्रहरु संग अवस्था अलिकति थप जटिल छ। त्यसैले, उदाहरणका लागि तपाईँले "Tele2" (ओम्स्क, महसुल "गुलाबी") मास्को देखि, तपाईं तुरुन्त प्रति मिनेट2rubles भुक्तानी गर्नेछ कल भने।9र5rubles, क्रमशः - र गर्दा घर संख्या र अन्य संचालक रूस मा कल।
आफ्नो क्षेत्र भित्र एसएमएस सन्देश 1.1 rubles खर्च हुनेछ। 2.5 rubles - रूस मा। एमएमसी संग सानो सजिलो - कुनै पनि सन्देश5rubles खर्च हुनेछ। यहाँ एक रोचक र लाभदायक महसुल "गुलाबी" ( "Tele2") छ। कोमी वा अन्य कुनै पनि देश - यो जहाँ तपाईं योजना जडान भएका छन् कुरा छैन। मुख्य कुरा यो तपाईं सम्पर्कमा रहन मदत गर्नेछ भन्ने छ। तर अब यो जडान गर्न तरिकामा कुरा हो। उनीहरू त्यहाँ एकदम धेरै थिए।
पहिलो परिदृश्य "पुरानो" मानिन्छ। उहाँलाई लागि, तपाईं एक मोबाइल फोन र राहदानी आवश्यक छ। हामी पहिले नै महसुल योजना जोडिएको छ नयाँ सिम कार्ड खरीद बारे कुरा गर्दै छन्।
त्यसपछि आफ्नो मनसाय बारेमा कर्मचारी सूचित आफ्नो निकटतम मोबाइल कार्यालय अपरेटर "Tele2" जाने। तपाईं आफैलाई महसुल "गुलाबी" जडान गर्न चाहनुहुन्छ के मलाई भन्नुहोस्। के तपाईं साँच्चै जडान खर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने अर्को के तपाईं छान्ने योजना को विवरण बताउन आवश्यक हुनेछ, र आग्रह गरिने छ। सत्य, कहिलेकाहीँ तिनीहरूले के।
अर्को, पासपोर्ट कार्यालय कर्मचारी पारित। उहाँले चाँडै लागि नयाँ सिम कार्ड जारी र हस्ताक्षर गर्न सम्झौता दिनुहोस्। यो बचत गर्नुहोस्। एक नम्बर समस्या को मामला मा, तपाईं सधैं यो "कागज" मार्फत सहायता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सबै समस्या हल छन्। अब तपाईं जडान महसुल "गुलाबी" ( "Tele2")। यो फोनमा सिम कार्ड सम्मिलित र यसको प्रयोग गर्न रहनेछ।
इमानदार हुन, आज त्यहाँ भविष्यको लागि अन्य विकल्प छन्। तपाईं नयाँ महसुल योजना र अन्य तरिकामा जडान गर्नुहोस्। थप आधुनिक र सार्वभौमिक। यो के हो? हामीलाई यो बुझ्न प्रयास गरौं।
दोस्रो परिदृश्य - यो पूर्ण आफ्नो मोबाइल अपरेटरलाई गर्नुपर्छ। तपाईंले पहिले नै "Tele2" प्रयोग गरेका छन् जब यो विधि उपयुक्त छ। भन्न, आफ्नो कोठा लागि महसुल योजना को परिवर्तन को यस प्रकारको छ।
आफ्नो मोबाइल फोनबाट डायल 611, र त्यसपछि "डायल-अप" थिच्नुहोस्। एक क्षण प्रतीक्षा - तपाईं अपरेटर जवाफ हुनेछ। उहाँले तपाईंलाई महसुल प्रयोग "गुलाबी" ( "Tele2") सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भन्न हुनेछ। यस्तो विधि मा जडान गाह्रो छैन। आफ्नो इच्छा परिचालक प्रतिक्रिया मा महसुल योजना को विवरण बताउन र त्यसपछि आफ्नो पासपोर्ट विवरण सोध्नु हुनेछ। यो तपाईं छ भन्ने प्रमाणित गर्न अनुमति दिन्छ - संख्या साँचो मालिक छ।
togokak यो प्रक्रिया गरिनेछ पछि, बस एक कुर्नुहोस्। तपाईं महसुल योजना को परिवर्तन सफल छ कि जानकारी गरिने एसएमएस-सूचना, आउन हुनेछ। साथै, त्यहाँ तपाईं छान्ने महसुल सबै nuances सिक्न मदत गर्न संयोजन देखाइनेछ। कुनै समस्या - कि यो हो।
यो विधि रोकियो (सबै भन्दा हालै) विशेष लोकप्रिय थिए। अब, प्रत्यक्ष संचालक सट्टा ग्राहकहरु अक्सर एक उत्तर मिसिन कुरा किनभने यो छ। र यो धेरै आवश्यक जानकारी प्राप्त को प्रक्रिया hinders छ। यसरी, यो ( "Tele2") तपाईं दर "गुलाबी" प्राप्त गर्न मदत अन्य तरिकामा फेला पार्न आवश्यक छ। र तिनीहरूले छ?
निस्सन्देह, हो। उदाहरणका लागि, अब मोबाइल संचालक को सबै ग्राहकहरु नयाँ सुविधाहरू आत्म-जडान र विच्छेदमा लागि विशेष आदेशहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले USSD-आदेश भनिन्छ।
को "गुलाबी" मा महसुल योजना परिवर्तन गर्न बस आफ्नो मोबाइल फोन * 155 *0# देखि डायल र फोनमा कल बटन थिच्नुहोस्। तपाईं अनुरोध पठाउन हुनेछ। यसलाई प्रशोधन भएपछि, तपाईं नयाँ महसुल योजनामा सफल संक्रमण को एक एसएमएस-सूचना प्राप्त गर्नेछ।
यो विधि प्रयोग गरिएको थियो, र ग्राहकहरु बहुमत। तथापि, प्रगति अझै पनि खडा गर्दैन। तपाईंले प्रयोग र के केही अन्य तरीकाहरु गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, इन्टरनेट को मद्दत गर्न Resort गर्न। कसरी यसलाई के गर्ने? हामीलाई यसको बारेमा थाहा दिनुहोस्।
महसुल "गुलाबी" ( "Tele2"), तपाईं मोबाइल अपरेटर को आधिकारिक वेबसाइट प्रयोग जडान गर्न सक्नुहुन्छ। यो भ्रमण र त्यसपछि प्राधिकरण पारित। यो गर्न, स्क्रिनको माथिल्लो दाहिने कुनामा "मेरो खाता" मा क्लिक गर्नुहोस्। अब आफ्नो सेल फोन र जो तपाईंलाई दर्ता मा निर्दिष्ट आफ्नो पासवर्ड टाइप गर्नुहोस्। वा पहिलो पटक दर्ता गर्नुहोस्।
अन्ततः तपाईं "मेरो खाता" मा प्राप्त हुनेछ। "सेवा" मा त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ त्यसपछि - "शुल्क"। त्यहाँ एक आवश्यक छ भनेर खोज्नु, र त्यसपछि यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईं सेलुलर योजना विवरण, साथै केही सम्भव कार्यहरू एउटा सानो मेनु हेर्न हुनेछ। "जडान" चयन गर्नुहोस् र तपाईँको कार्य पुष्टि गर्नुहोस्। केही अवस्थामा यो हामी जडान जो एक नम्बर, डायल गर्न आवश्यक छ। कि यो छ - प्रतीक्षा चेतावनी र परिणाम आनन्द।
त्यसैले, आज हामी तपाईं संग, मोबाइल अपरेटर "Tele2" मा "गुलाबी" को दर के हो सिकेका छन्। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो परिवार र साथीहरू सबै आनन्द अनुसार मोबाइल अपरेटर गर्नेहरूलाई लागि एकदम लाभदायक महसुल योजना छ।
जडान लागि एउटा कुरा भन्न सक्छन् - यो एक धेरै नै सरल प्रक्रिया हो। मुख्य कुरा - आउट गर्न उपयोगी हुनेछ भन्ने विकल्प रोज्नुहोस्। पक्कै मा भने कसरी राम्रो डाटा योजना, तपाईं आफैलाई एक वा दुई महिना नयाँ सिम कार्ड को खरीद गर्न सक्छन्। र सन्तुष्टि दर को मामला मा, यसलाई मुख्य फोन नम्बर अनुवाद।
को महसुल "सुपर टन" (एकाटेरिनबर्ग): विवरण, समीक्षा
टन "स्मार्ट Bezlimitische" महसुल: विवरण, मूल्य, र समीक्षा
च्यानल शैलीमा सुरुचिपूर्ण महिलाको कोट
बोर्डको बोरिस गोनुनुभ
होटल रियू नौबाआ4* (पुन्टा काना / डोमिनिकन रिपब्लिक): विवरण, तस्बिरहरू र समीक्षाहरू।
वेरा Chaplin: जीवनी, रचनात्मकता, फोटो
Grated एक केक कसरी Bake गर्न